Sida loo dhaqaajiyo autopilot gudaha Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05
Sida loo dhaqaajiyo autopilot gudaha Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05 sano 2 2 bilood ka hor #1075
Waxaan hadda soo degsaday xirmada cajiibka ah ee Airbus A320 Qoyska Mega Pack FSX & P3D Version 3.05.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan qabaa dhibaato.
Mar kasta oo aan is-qabsado, ma shaqeyn karo autopilot. Sideen u sameeyaa taas? Sidee baan u fuulaa, duulayaa, hoos u dhigi karaa?
Ma faraxsanaan lahayd haddii qofku ii sharaxo aniga.
Waad ku mahadsan tahay xirmo fantastik ah.
Sida loo dhaqaajiyo autopilot gudaha Airbus A320 Family Mega Pack FSX & P3D Version 3.05 sano 2 2 bilood ka hor #1081
Ma taqaanaa nooca loo yaqaan 'airbus 321 default' FSX? Haddii aad tahay oo uusan ka shaqeynaynin xirmadda mega ... ka dibna tirtir feylka galkaaga diyaaradda. Dami amniga internetka oo mar labaad soo degso softiweerka ... Haddii aad u baahan tahay inaad waxbadan ogaatid ii soo sheeg
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.181